ကိတ် Middleton ကိတ် "ကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့" mom, Charlotte ကျောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "လျစ်လျူရှု" - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် »ကိတ် Middleton ကိတ် "ကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့" mom, Charlotte ကျောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "လျစ်လျူရှု"
ကိတ် Middleton ကိတ် "ကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့" mom, Charlotte ကျောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "လျစ်လျူရှု"
ကိတ် Middleton သူမပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရှိရာတက္ကသိုလ်ကနေတချို့ဒီဂရီမှတော်ဝင်အသက်တာ၌ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည် မင်းသားဝီလျံ ။ စုံတွဲဧပြီလ 2008 အတွက်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအဓိကဖြစ်ရပ်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပွီးနောကျ, ကိတ်ဟာမီးမောင်းထိုးအောက်၌ဖုံးထားခဲ့ပါတယ်။ နေ့စွဲရန်, Duke နဲ့ကိန်းဘရစ် Duchess အများပြည်သူမျက်စိနှင့်တော်ဝင်ပရိတ်သတ်တွေအတွက်သူတို့ဘဝများစွာအသက်ရှင်နေထိုင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ torque မိဘကပို "စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့" ကစားကွင်းဖြစ်ပါတယ်မျှော်လင့်ထား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထို Duchess အခြား mom, နေဖြင့်ခိုးယူခဲ့ - ဒါပေမဲ့ငါချစ်သော Duchess မှေးမှိန်ဖို့စီမံ?
ယနေ့တွင် မင်းသမီး Charlotte ကျောင်းမှာသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝရက်သတ္တပတ်ပြီးစီးခဲ့နှင့်တော်ဝင်ပရိတ်သတ်တွေနေရာတိုင်းမိန်းကလေးလေးနှစ်ကောင်းစွာပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေမျှော်လင့်။
မိမိတို့ကလေးကြောငျးအတှကျပွငျဆငျခွငျးကိုကူညီဖို့, ကိန်းဘရစ်ရဲ့ Battersea ၏ Duke နဲ့ Duchess သူ၏ပထမဦးဆုံးနေ့အဘို့သောမတ်စ်မှတင်ကြ၏။
ဒါပေမယ့်နှင့်အတူ မင်းသားဂျော့ခ်ျ ပြီးသားကျောင်းမှာအတွက်စုံတွဲကင်းဘရစ်တောင်းဆိုချက်များကိုမှနေသားတကျပါပဲ။ သောမတ်စ်ရဲ့ Battersea ။
အတန်းကိတ် Middleton: အဘယ်ကြောင့်ကိတ် Middleton သူမကကစားကွင်းများတွင်လျစ်လျူရှုခဲ့သလဲ (ရုပ်ပုံ: Getty)
တစ်ခုမှာမိဘအခြားမိခင်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကိတ်နဲ့ William, အထူးသဖြင့်ဘိုးဘေးတို့သထက်တကယ်တော့ရှိကွောငျးကို The Daily Mail ကပြောသည်။
အွန်လိုင်းကိတ် Middleton: ကိတ်နဲ့ William ကျောင်းသူ၏ပထမဦးဆုံးနေ့အဘို့မင်းသမီး Charlotte depositing (ရုပ်ပုံ: Getty)
ကိတ်နဲ့ William ပြင်းပြင်းထန်ထန်သာမန်အဖြစ်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအနေနဲ့ပညာရေးဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ရန်အကြံပြုကြပါပြီ, သူတို့အဖြစ်ကိုမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှကျောင်း run ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ပြောကြပါတယ်။
အဆိုပါ Duchess မင်းသား၏ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်နေ့ကကျောင်းကိုမင်းသားဂျော့ခ်ျကိုတောင်ဦးဆောင်ထားပါတယ် မင်းသားလူးဝစ် သူမအကြီးအကျယ်နံနက်အနာရောဂါခံစားခဲ့ရအဖြစ် 2018 အတွက်ကဂျော့ခ်ျ၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကပျောက်ဆုံးခဲ့လို့။
လိုင်းကိတ် Middleton: အဆိုပါ Duchess ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်းဖြစ်ပါတယ်သူမကကျောင်းအဖြစ်မကြာခဏတတ်နိုင်သမျှ run ခံရဖို့လိုလား (ရုပ်ပုံ: Getty)
သူကဒုတိယနှစျတှငျကြွလာသောအခါဂျော့ခ်ျများအတွက်ဝီလျံနှင့်ကိတ်၏အဖိုးအခသည်လက်ရှိတွင်6429 £အဆုံးစုစုပေါင်းဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဒုတိယကလေးကြောင့်သူတို့ Charlotte များအတွက်အနည်းငယ်လျော့နည်းပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်စက္ကန့်ကလေးသူငယ်တွေအတွက်တာဝန်ခံသက်တမ်းနှုန်း6305 £ဖြစ်ပြီးမင်းသားလူးဝစ်နောက်ဆုံးမှာနှစ်အနည်းငယ်၌သူ၏အဟောင်းများကိုမောင်နှမပူးပေါင်းပါလျှင်, သူ့အခကြေးငွေ5790 £မည်ဖြစ်သည်။
သူ့အစ်ကိုကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်, Charlotte ဂုဏ်အသရေမှဝေးလ်များအတွက်မိသားစုအမည်များကို ယူ. , အဘယ်သူသည်သူ၏ဖခင်နှင့်ဦးလေးတို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအဆက်ဆက်ခံသောနည်းဥပဒေများနှင့်အညီ, သူ့ဆရာများနှင့်ရွယ်တူချင်းအတူ Charlotte ကင်းဘရစ်အဖြစ်လူသိများလိမ့်မည် မင်းသားချားလ်စ်၏ခေါင်းစဉ်ကို။ 19659004] မင်းသားဂျော့ခ်ျသူစိမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုမောင်နှမ "တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်" ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိနှမဖြစ်ကောင်း, ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းပါလိမ့်မယ် join ဖို့အတှကျအခှငျ့အလမျး။
ကိတ် Middleton: မင်းသမီး Charlotte Battersea သောမတ်စ်မှာမင်းသားဂျော့ခ်ျ join ပါလိမ့်မယ် (ရုပ်ပုံ: Getty)
"ဂိမ်း [အပြင်ကလူတွေနဲ့] စတငျရလှည်စားနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပေါ်မှီခိုဖို့သင်ယူပါ။ "
ဂျာနယ်: J-Lo "Hustlers" အတွက် glitzy ပြပွဲခိုးယူ - လူတွေ
သူမကစိတ်ကျရောဂါနှင့်မူးယစ်ဆေးဆန့်ကျင်သူမ၏စစ်တိုက်အနိုင်ရဘယ်လို Cara Delevingne